7 नेपल्स मा इटाली देखि सर्वश्रेष्ठ दिन यात्राहरू | एक ट्रेन सेव
घर > यात्रा युरोप >7नेपल्स मा इटाली देखि सर्वश्रेष्ठ दिन यात्राहरू
पढ्ने समय:6मिनेट(Last Updated On: 06/03/2020)
नेपल्स एक अद्भुत छ, quintessential इटालियन शहर. यो पहाड भरिएको छ, पुरानो भवन, र अन्य साना र प्यारा विचित्रताहरू. यसलाई अनिवार्य गर्ने प्रामाणिक इटालियन आत्मा र नेपल्स सबै भन्दा राम्रो दिन यात्राको अनुभव गर्न चाहन्छ सही इटालियन सबैका लागि शहर छ.
तथापि, सबै छैन. तिम्ले पर्छ नेपल्स गर्न भव्य pizzas लागि जाने तिनीहरूले बनाउन. को pizzas छैन प्रकारको तपाईं संसारमा कहीं पनि पाउन सक्नुहुन्छ दैनिक हो. को नापोलि पिज्जा अद्वितीय कुरा हो र मेल खाने छैन गर्न सकिन्छ कि एक स्वाद दावा.
तर हामी digress. तपाईं नेपल्स आफूलाई पाउन भने, तपाईं आफ्नो सबै समय खर्च हुँदैन शहर को सौन्दर्य मा marveling र आफ्नो महिमित पिज्जा खाने. तपाईं पनि वरपर भ्रमण गर्न आवश्यक. किनभने नेपल्स इटाली को सबै भन्दा सुन्दर सेरोफेरो केही दावा छ. को सुरम्य गर्न विशाल Pompeii भग्नावशेष र understandably प्रसिद्ध अमाल्फी तट देखि - तपाईं धेरै देख्न सक्नुहुन्छ.
भनेर मनमा संग, हामी तपाईं नेपल्स देखि सात सर्वश्रेष्ठ दिन यात्राको को परम सूची दिएर तपाईंलाई मदत हुनेछ लाग्यो, इटाली. हामीलाई सुरु गरौं:
1. एउटा नेपल्स देखि सर्वश्रेष्ठ दिन यात्राहरू: को Herculaneum भग्नावशेषहरूले
हामी स्पष्ट तर कम स्पष्ट संग छैन सुरु गर्न चाहन्थे. Herculaneum Pompeii को कम प्रसिद्ध भान्जा छ. अब प्रसिद्ध 79 माउन्ट VESUVIUS को ई फुट्ने काम दुवै Pompeii र छिमेकी Herculaneum नष्ट.
तथापि, आज, सबै सम्मान Pompeii जाने. लगभग संसारका हरेक व्यक्ति Pompeii छ के थाह, अझै Herculaneum बारेमा धेरै केहि जानते. तपाईं हामीलाई सोध्न भने यो एउटा ठूलो लाज छ.
सबै भन्दा पहिले, थप संरक्षित Herculaneum छ. जब तपाईं प्राप्त त्यहाँ, तपाईं घरहरू र अन्य स्मारक को सबै भन्दा लगभग जस्ताको तस्तै पाउनुहुनेछ.
दोस्रो, Herculaneum शायद भीड छ. हामी पहिले नै भनेका छन् रूपमा, यी भग्नावशेष हो कम ज्ञात र भ्रमण गर्दै सानो संख्या मा. यो ठूलो विस्तार देख्न पनि सानो र सजिलो छ.
Visiting Herculaneum धेरै सजिलो छ, रूपमा रेल हरेक घण्टा या त नेपल्स देखि यो जानुहोस्. यी भग्नावशेष हेर्न तपाईं प्रशस्त हुनेछ रूपमा पनि समय चिन्ता छैन.
तापनि Herculaneum थप सुन्दर छ, हाम्रो विचारमा, तपाईं Pompeii सम्झना गर्न सक्दैन. राम्रो, नेपल्स सबै भन्दा राम्रो दिन यात्राको सधैं समावेश छ Pompeii र Herculaneum दुवै.
नेपल्स को सम्पूर्ण शहर शक्तिशाली VESUVIUS को छाया बसोबास. तथापि, मात्र Pompeii साँच्चै यो VESUVIUS को सक्छ थाह भनेर भन्न सकिन्छ. पम्पी मा जब तपाईं पहाड हेर्न सक्नुहुन्छ, र तपाईं साँच्चै युरोप मा मात्र सक्रिय ज्वालामुखी को बल बुझ्न सक्छौं.
जब तपाईं Pompeii जाने, तपाईं तयार हुनु आवश्यक छ. ठाउँ अधिकांश मानिसहरू लाग्छ भन्दा बढी विशाल छ, त्यसैले तपाईंले प्रारम्भिक तपाईं रूपमा त्यहाँ जाने छ. कि माथि, तपाईं गर्मी मा जाने भने, यो धेरै तातो छ, तपाईं पानी धेरै ल्याउन आवश्यक हुनेछ त.
तथापि, Pompeii गर्न प्राप्त सजिलो भाग हो. तपाईं चाँडै नेपल्स देखि यो पुग्न सक्दैन मार्फत रेल, जो दिन भर त्यहाँ जान्छ.
3. एउटा नेपल्स देखि सर्वश्रेष्ठ दिन यात्राहरू: माउन्ट VESUVIUS
स्वाभाविक, कुनै नेपल्स गर्न भ्रमण VESUVIUS देखेर बिना पूर्ण हुन सक्छ. तपाईं शाब्दिक किनभने जो नेपल्स मा लगभग जहाँबाट देख्न सकिन्छ यसको विशाल आकार को यो देखेर बिना जान सक्नुहुन्छ.
तथापि, तपाईं सबै भन्दा राम्रो यो टाढाबाट देखि अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ, तर द्वारा यसमा खडा. पर्वतमा धेरै अग्लो छ, तर तपाईं अझै पनि एक संगठित भ्रमण लिन र एक वा कम घण्टा मा पदयात्रा गर्न सक्नुहुन्छ. तपाईंले यसलाई चुनौतीपूर्ण पाउनुहुनेछ, तर माथि तपाईं प्राप्त हुनेछ अनुभव सम्पूर्ण लायक यो छ.
माउन्ट VESUVIUS पुग्न, तपाईं आवश्यक सबै Ercolano Scavi स्टेशन गर्न तल नजिकै तपाईं लिन्छ कि नेपल्स देखि एक छिटो रेल लिन छ. त्यसपछि तपाईं को एक लिनु आवश्यक Vesuvio एक्सप्रेस कि सामान्य को सुरूवात विन्दु जाने बसें चुनौतीपूर्ण पदयात्रा.
नेपल्स गाडिहरु गर्न पेसकारा
4. Positano मा भएको अमाल्फी तट
सम्पूर्ण अमाल्फी तट बस देखेको गर्न फैलन. एक पटक तपाईं त्यहाँ जाने, तपाईं चाँडै किन महसुस. को विशाल भीर श्रद्धा प्रेरक छन्, र समुद्र को सौन्दर्य indescribable छ.
तिम्ले पर्छ एक रेल लिन या त सोरेंटो वा सलर्नो गर्न सवारी. त्यसपछि तपाईं एक बस लिन वा एक कार भाडामा गर्न सक्नुहुन्छ अमाल्फी तट ट्राभर्स कि सानो सडक भन्दा जान.
Positano तट को बीचमा सही छ र सबै भन्दा छ सुन्दर शहर त्यस माथि. के तपाईंले कहिल्यै अमाल्फी तट मा सहर को कुनै पनि तस्वीर देखे भने, तपाईं सम्भवत Positano देखेको छु. शहर घेरने कि ख्याति योग्य छ, दृश्यहरु मनोरम छ रूपमा.
शक्ति गाडिहरु नेपल्स गर्न
नेपल्स गाडिहरु गर्न salerno
नेपल्स गाडिहरु गर्न टारान्टो
5. एउटा नेपल्स देखि सर्वश्रेष्ठ दिन यात्राहरू: सोरेंटो
Sorento को अमाल्फी तट को विपरीत पक्षमा बस्छन भनेर एउटा सानो शहर छ. यो नेपल्स गर्न यसरी नजिक छ, र तपाईं पनि धेरै सजिलै मार्फत पुग्न सक्छ स्थानीय रेल रेखा.
शहर स्ट्राइकिङ् तटों र भव्य पुरानो शहर एक जोडी दावा. धेरै जस्तो मान्छेहरु सोरेंटो जाने, समुद्र र आतंकित गर्नु ठाडो भीर लागि, तर इतिहास. सोरेंटो साँच्चै quintessential पुरानो इटालियन शहर छ. यो नेपल्स भन्दा धेरै सानो छ र साँचो पुरानो इटालियन आत्मा मात्र सानो इटालियन दक्षिण को शहर हुन सक्छ कि छ.
कि माथि, तपाईं गर्नुपर्छ निश्चित सोरेंटो भ्रमण नेपल्स देखि किनभने Capri आफ्नो सर्वश्रेष्ठ दिन यात्राको एक मा. Capri को Isle नजिकै छ र टाढा हो के तपाईं कहिल्यै देख्ने सबैभन्दा सुन्दर सानो द्वीपहरु को एक.
नेपल्स गाडिहरु गर्न फगगिया
TIVOLI नेपल्स गाडिहरु गर्न
नेपल्स गाडिहरु गर्न Temoli
नेपल्स गाडिहरु गर्न लेक्से
6. द्वीप को इज्चिया
धेरै सुन्दर द्वीप घेर नेपल्स. तथापि, टाढा गरेर सबैभन्दा सुन्दर एक इज्चिया छ, र यहाँ किन छ:
इज्चिया नेपल्स को खाडी मा सबै भन्दा ठूलो द्वीप छ
इज्चिया यो सबै छ: समुद्र तट, थर्मल पानी, रेस्टुरेन्ट, र भव्य भवन
यो नेपल्स मा विश्राम लागि सबै भन्दा राम्रो ठाँउ हो. तपाईं पनि चाँडै नेपल्स को केन्द्र देखि एक डुङ्गा लिएर यसलाई प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ.
7. Reggia डि कासर्टा: इटालियन भर्साइल्लेज
तिनीहरूले यो विशाल कल छैन 1200 कोठा दरबार केही लागि इटालियन भर्साइल्लेज. राजमहलको Monumental staircases भरिएको र छ यूनेस्को विश्व सम्पदा साइट. तपाईं पनि lavish शाही अपार्टमेन्ट र presepi एक संग्रह पाउनुहुनेछ - क्रिसमस नेपल्स को cribs.
समग्रमा, तपाईं यो विशाल दरबार गएर गलत जान सक्छ. तपाईं नेपल्स मा केन्द्रीय स्टेशन बाट एक रेल लिन र कासर्टा स्टेशन मा प्राप्त गर्न सक्छौं. यो दरबार मात्र छोटो त्यसपछि पैदल छ.
कासर्टा गाडिहरु गर्न नेपल्स
कासर्टा गाडिहरु गर्न salerno
कासर्टा गाडिहरु शक्ति
बारी कासर्टा गाडिहरु गर्न
त्यसैले, तपाईं तिनीहरूलाई छ, सात नेपल्स देखि सबै भन्दा राम्रो दिन यात्राको. तपाईं साँच्चै नेपल्स को सौन्दर्य अनुभव गर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईंले यी भ्रमणहरू सबै मा जान आवश्यक. पनि, तपाईं अझ बढी सिक्न चाहनुहुन्छ भने, सम्पर्क गर्न स्वतन्त्र महसुस एक ट्रेन सेव.
Do you want to embed हाम्रो ब्लग पोस्ट “7 नेपल्स मा इटाली देखि सर्वश्रेष्ठ दिन यात्राहरू” आफ्नो साइट मा? तपाईं या त लिन हाम्रो फोटो र पाठ र हामीलाई क्रेडिट लिंक संग यो ब्लग पोस्ट. वा यहाँ क्लिक गर्नुहोस्: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-day-trips-naples%2F%3Flang%3Dne اور- (को एम्बेड कोड हेर्न एक सानो तल स्क्रोल)
Daytrips europetravel italyvacation नेपल्स napoli Tranride रेल सुझावहरू यात्रा traveltips